Ny Revolisiona Amerikanina - 1763 ka 1789
Momba ity tranokala ity
American Revolution boky
Sarintany momba ny American Revolution
American Revolution mirakitra
Fanontaniana momba ny American Revolution
American graphics graphic
Mpahay tantara momba ny Revolisiona Amerikana
#ZNUMX ny American Revolution
American Revolution dia manontany
American Revolution teny nalaina
Ireo lohahevitra momba ny Revolisiona Amerikana
Revolisiona amerikana iza?
American Revolution wordsearch - hevitra
American Revolution wordsearch - hetsika
American Revolution wordsearch - olona
American Revolution wordsearch - toerana
Salama mpampiasa adblock…
Toa very tanteraka ianao…
Ny Revolisiona Amerikanina
The Revolisiona Amerikana nanomboka tamin'ny antenatenan'ny 1760 ho fikomiana ireo mpanjanantany anglisy nipetraka teo amoron'ny ranomasina atsinanan'i Amerika Avaratra. Nifarana tany 1789 niaraka tamin'ny fananganana firenena vaovao, notarihin'ny lalàm-panoratana an-tsoratra sy rafi-panjakana vaovao iray.
Ny Revolisiona Amerikanina dia nisy fiatraikany lalina teo amin'ny tantara maoderina. Izy io dia nanohitra ary nanelingelina ny fahefan'ny fahefana notarihin'ny monarkianina eropeana. Izy io dia nosoloiny ny fanjakana anglisy izay manana rafitra miasa mifototra amin'ny fitsipika Enlightenment ny repoblikana, ny fiandrianam-bahoaka ary ny fisarahana ny fahefana.
Ny American Revolution dia nampiseho fa ny revolisiona dia mety hahomby ary ny olon-tsotra afaka mifehy ny tenany. Ny hevitra sy ohatra nasehony dia nanentana ny Revolisiona frantsay (1789) ary ny hetsika nasionalista sy fahaleovantena. Ny tena zava-dehibe dia ny revolisiona amerikanina dia niteraka an'i Etazonia, firenena izay ny soatoavina politika, ny hery ara-toe-karena ary ny hery ara-tafika no namolavola sy namaritana ny tontolo maoderina.
Ny tantaran'ny Révolisiona Amerikanina dia iray amin'ny fanovana haingana sy fivoarana. Talohan'ny 1760, ny zanatany amerikana 13 dia nankafizin'ny fanambinana ara-toekarena am-polony taona sy fifandraisana tsara amin'i Britain. Ny ankamaroan'ny Amerikana dia mihevitra ny tenany ho Britons tsy mivadika; nahafaly azy ireo izy ireo ho olom-pinanjaka hendry sy tsara fanahy kokoa noho ny andevo sy ny vazin'ireo mpanao jadona vahiny sasany. Ny revolisiona dia afaka mivoatra eo amin'ny fiaraha-monina mpanjanaka amerikana toa tsy misy dikany.
Nandritra ny antenatenan'ny 1760, ity fitsapana ity ho an'i Angletera dia nosedrain'ny olana toa tsy dia milamina: tsy fitovian-kevitra sy adihevitra momba ny politikam-panjakana sy hetra. Tao anatin'ny folo taona, ny mpamboly amerikana dia nitafy fitaovam-piadiana sy tohatra ary nandeha an-tady hiady tamin'ny tafika anglisy tany Lexington, Massachusetts. Tamin'ny tapaky ny 1776, ny mpanao politika amerikana dia nihevitra ny fatorana miaraka amin'i Grande-Bretagne ka tapaka tsy niova firy ka nifidy ny fahaleovan-tena izy ireo. Io fahaleovan-tena io dia nitondra fanamby roa: ady tany Grande-Bretagne, ny herin'ny tafika misy eo amin'izao tontolo izao ary ny filàna rafitra vaovao. Ny fiatrehana ireo fanamby ireo dia nanamarika ny dingana farany amin'ny Revolisiona Amerikana.
Ny tranonkalan'ny Revolisiona Amerikanina an'ny Alpha History dia misy loharanom-pahalalana voalohany sy faharoa hanampiana anao hahafantatra ny zava-mitranga any Etazonia eo anelanelan'ny 1763 sy 1789. ny pejy momba ny lohahevitra, nosoratan'ireo mpampianatra sy mpahay tantara efa za-draharaha, dia manome famintinana fohy momba ireo tranga lehibe sy olana lehibe. Izy ireo dia tohanan'ny fitaovana miresaka Tantara amin'ny, glossaries, profil biografika, sarintany momba ny foto-kevitra, fakan-teny, historiography sy ny mombamomba ny malaza mpahay tantara. Ahitana karazana hetsika an-tserasera toa ny crosswords sy safidy maro Quizzes, izay ahafahanao manandrana sy manavao ny fahatakaranao an'i Amerika amin'ny revolisiona.
Ankoatry ny loharanom-baovao fototra, ny votoatiny rehetra amin'ity tranonkala ity dia © Alpha History 2015-19. Ity atiny ity dia tsy azo adika, naverina navoaka indray na tsy misy alalana avy amin'ny alalàn'ny Alfa. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fampiasana ny tranokalan'i Alpha History sy ny atiny, azafady zahao ny momba anay Fepetra fampiasana.
Hikaroka ity tranonkala ity:
1765 ho 1773
1774 ho 1776
1777 ho 1783
1784 ary any aoriana any
Iza no iza
Ny Ady Lehibe I
Ny ady mangatsiaka
Ny Peculiar taloha
Momba ity tranonkala ity:
American Revolution dia mirakitra lahatsoratra, loharano ary fomba fijery momba ny hetsika any Etazonia eo anelanelan'ny 1763 sy 1789. Ity tranonkala ity dia namboarina sy notahirizin'ny Alpha History ary mirakitra ny teny 100,000 amin'ny peo 200. Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho ny fitsidihanay FAQ pejy or Fepetra fampiasana.